Animators | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » Animation
အလွတ်တန်း, စီမံကိန်းကို / လိုအပ်အဖြစ်အခြေခံ
စတင်ရန် $ 30 / နာရီ
အလွတ်တန်း / စီမံကိန်းကိုအခြေစိုက်အရင်ဖျော်ဖြေအတွေ့အကြုံရှိ Animation ရှာဖွေနေ။
အခြားအကို Adobe CS ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းတစ်ပေါင်းအဖြစ်ကောင်းစွာ - အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် / ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် Adobe Premiere အတွက်တတ်ကျွမ်းဖြစ်ပေးပါ။
ကျနော်တို့အမြန် turnarounds နှင့်တကွ, ကော်ပိုရိတ် advertorial, လူမှုရေးမီဒီယာအများကြီးလုပ်ပေး, ဒါကြောင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်နှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်ပါ။
hours ပုံမှန်အား 9-6 ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ midtown ၌အကြှနျုပျတို့၏ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်သင့်အားပိုနှစ်သက်ပေမယ့်ဝေးလံခေါင်ဖျားအလုပ်ကိုစီမံကိန်းအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပေါ် မူတည်. ဖြစ်နိုင်ခြေပါ!
ကျနော်တို့ကြီးထွားဖို့အခန်းတစ်ခန်းအတူ $ 30 / နာရီမှာ start နှင့်လည်းအချို့သောစီမံကိနျးအတှကျတစ်အထုပ်ဘတ်ဂျက်အပေါ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရှာဖွေနေ: အမှုအရာလုပ်ပုံကိုသိသောသူဖန်တီးမှု Animation တတ်နိုင်သမျှအရိုးရှင်းဆုံးလမ်းအတွက်တတ်နိုင်သမျှအေးမြကြည့်ရှုသူ, jazz တက်စာသား, infographics နှင့်အခြားကာတွန်းဗီဒီယိုများကူညီရန်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူတက်လာနိုင်ပါတယ်။
ပါ NO တယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်မရှိ, DROP BYS ။
ဆိုးကျိုးများအပြီး Animation ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့် photoshop ထုတ်လုပ်မှု ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2016-09-30
ယခင်: 1st လက်ထောက်ကင်မရာ